बोटोक्स र अनुहार लिफ्टहरू प्रयोग नगरी कायाकल्प वास्तविक छ!
म तपाईंलाई मेरो कथा साझा गर्न चाहन्छु। यो तपाईं कसरी जवान हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंको खुशी पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कथा छ। हुनसक्छ, तपाईले यहाँ जे पढ्नुभयो त्यसले तपाइँको जीवनमा गम्भीर परिवर्तनहरू गर्न प्रेरित गर्दछ।
जेनिफर रडनरको कथा
दस बर्ष अघि, म एक सम्बन्ध विच्छेद माध्यम बाट गए। मेरो श्रीमान्‌ले मलाई एउटी युवतीको लागि छोड्नुभयो। म गहिरो उदास भएँ। मैले अन्य व्यक्तिहरूबाट कुनै ध्यान पाइन। मेरो काम एक मात्र चीज थियो जसले मलाई मेरो एकाकीपनबाट बचायो। जब मैले ऐनामा हेरेँ, म अबदेखि उस आइमाईलाई देखिन जुन म पहिले थिएँ। दिनभरि मेरो झिम्का झन् झन् गहिरो हुँदै गयो, र मेरा आँखा फुसिदिए। म रातभरि मेरो तकियामा रोएँ।
म कहिले काहिँ एउटा फेसलिफ्टमा विचार गर्दछु, तर त्यस्तो प्रक्रियामा भाग्य खर्च हुन्छ, र दुर्भाग्यपूर्ण जटिलताको खतरा हुन्छ।
मसँग मेरो साथी छ जो मेरो उमेरको बारेमा छ। धेरै समय अगाडि मैले याद गरें कि उनको छालाले बढी टोन प्राप्त गरेको छ, र उनको निधारमा र आँखा वरिपरि झिम्का झारहरु निक्लिएको थियो, र उनको jawline राम्रो परिभाषित भएको थियो। उनी हालै पनि धेरै मुस्कुराइरहेकी छन्। मैले उनलाई अनुसन्धान शुरू गरें कि ऊ मायामा परेकी थिइन, र उनको चुनिएकोको नाम के हो? तर मेरो साथीले उत्तर दियो कि उनिसँग अब अनुहारको हेरचाहको लागि गोप्य उत्पादन छ कि यस्तो उचाल्ने प्रभाव प्रदान गर्दछ।
म उनको छालाको अवस्थाको बारेमा एकदम ईर्ष्यालु थिएँ (र राम्रो तरिकाले), र मैले आफैलाई सोच्दै गरें, "म उनी भन्दा किन खराब छु?"। त्यसोभए, म त्यो चमत्कार उत्पादको बारेमा प्रश्न सोधिरहें र मैले यो कहाँ पाउन सक्छु। यो केवल ... एक क्रीम मात्र भयो। यसको राम्रो नाम छ, Goji Cream। क्रीमको सक्रिय संघटकहरू गोजी बेरी हुन्। मैले खोजेका सबै उत्तरहरू प्राप्त गरिसकेपछि, म घर गएँ र मेरो कम्प्युटर अन गरें। मैले सहि वेबसाइट फेला पारे र एउटा अर्डर गरे। केहि समय पछि, मैले त्यहाँ मेलमा क्रीमको साथ एक सुन्दर ट्यूब प्राप्त गरें।
मैले निर्देशनले भनेको जस्तै नै उत्पादन प्रयोग गर्न सुरू गरें। र… परिणामहरू देखिनका लागि मैले लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। मेरो अनुहारको पट्टि आकारमा घटाउन थाले, मेरा आँखा अब पफिया छैनन्, र झिम्का भित्रबाट भरिएको देखिन्थ्यो ... मेरो अनुहार दिउँसो जवान हुँदै गयो! मानौं म कुनै समय मेशीनमा विगतमा यात्रा गर्दैछु। अघि, म विश्वास गर्दिन कि त्यस्तो केहि सम्भव हुनेछ, तर ऐनाले पुष्टि गर्यो कि यो वास्तवमै वास्तविकको लागि भइरहेको थियो!
एक महिना भित्र, म मान्यता बाहिर परिवर्तन भयो। म 10 वर्ष कान्छी देखिरहेको थिएँ, अझ बढी। मेरा आफन्त र सहकर्मीहरूले शाब्दिक रूपमा मलाई चिन्न सकेनन्। म कसरी त्यस्तो प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छु भनेर सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा थाँहा गर्न थाल्छु। मेरी आमा र मेरो बुआले मलाई उनीहरूलाई यो अविश्वसनीय क्रीम अर्डर गर्न मद्दत गर्न आग्रह गर्नुभयो। धेरै पहिले नै, उनीहरूले यो प्रयोग गर्न पनि सुरू गरे। तिनीहरू भन्छन तिनीहरू वास्तवमै यो मनपराउँदछन्, र भविष्यमा यसलाई प्रयोगमा राख्नेछन्।
मैले यो याद गर्न थालेको छु कि मानिसहरूले मलाई प्रशंसाको साथ हेर्छन्। अर्को दिन मैले शास्त्रीय संगीत कन्सर्टमा एक संस्कृत व्यक्तिलाई भेटें, र उसले विवाहको बारेमा कुरा गरिसकेको छ। हुनसक्छ, त्यो मेरो भाग्य हो, जो जान्दछ।
प्लास्टिक सर्जरी र बोटोक्स इन्जेक्सनहरू बिना कसरी जवान देखिन्छ जब तपाईं 56 हुनुहुन्छ?
म तिमीलाई मेरो कायाकल्पको कथा भन्न चाहन्छु। सायद यो 50 माथिका अन्य महिलाहरूको लागि रोचक हुनेछ जुन आकर्षक देखिने सपना देखिरहेछन्। मेरो विधि राम्रो छ किनकि यो प्रभावी, सस्तो र तपाईंको धेरै समयको आवश्यकता पर्दैन।
हेलेन, एक स्कूल शिक्षक
मेरो नाम हेलेन हो। म 5,000 व्यक्तिको जनसंख्याको साथ एउटा सानो शहरमा बस्छु। म शिक्षकको रूपमा काम गर्छु। म विवाहित छु र मेरी छोरी छिन जसले मेरी श्रीमान् र मलाई धेरै राम्रो र चलाख नाति एनी उपहार दिईरहेकी छिन्।
मैले मेरो अनुहार कायाकल्प गर्ने निर्णय किन गरें? साधारणतया किनभने एक महिला आफ्नो उमेरको परवाह नगरी आकर्षक देखिनुपर्दछ र यसैले उनको पार्टनरले उनलाई माया गरिरहनेछ। मलाई विश्वास छ यो कुनै पनि महिलाको लागि स्वाभाविक हो! मलाई लाग्छ कि सुन्दरताले संसारलाई बचाउन सक्छ! जब म 56 पाएँ म यस उमेरको लगभग कुनै पनि महिला जस्तै देखिन्थें।
म कसरी जवान देखिन्छु
समय समयमा मैले कायाकल्पसँग सम्बन्धित केहि नयाँ कुरा सिकिरहेको थिएँ। मैले मौलिक कायाकल्प विधिहरू जस्तै फेसलिफ्ट, बोटोक्स ईन्जेक्सन र सौन्दर्य उपकरणहरू (जस्तै लेजर छाला पुन: सफा गर्ने) को अध्ययन गरे। प्लास्टिक सर्जरीको लागि भाग्य लाग्छ। म बोटोक्स ईन्जेक्सनसँग डराउँदछ किनकि मेरो साथीले उनीहरूलाई प्रयास गरेको थियो र नतीजा एकदमै नराम्रो थियो। उनले यो पछि घरमा तीन हप्ता बिताए। म मेरो अनुहारमा लागु गरिएको सौंदर्य उपकरणको विचारको बिरूद्ध कडा भए पनि जहाँ म बसोबास गरेको शहरमा यस्तो सेवा थिएन र यसले मलाई नजिकको ठूलो शहरको लागि4घण्टा भन्दा बढी लिन सक्थ्यो।
जहाँसम्म, मैले मेरो छालाको समस्याहरूको समाधान खोज्न सकें ...
एक पटक, म टिभी हेर्दै थिएँ जब एक पप स्टारले उनको शल्यक्रियाको प्लास्टिक सर्जरीको डरको बारेमा कुरा गर्दैथिए। मैले सुनेको पनि कि उनले एक चोटि स्विस क्लिनिकमा प्लास्टिक सर्जरी गरी र उनलाई मार्न लाग्यो। अमेरिकी ब्यूटी संस्थानका प्रतिनिधिहरूले उनलाई तत्काल मेरो ध्यान आकर्षण गर्ने उत्पादनको प्रयास गर्न प्रस्ताव गरे।
टिभी कार्यक्रम सकिए पछि मैले आफ्नो कम्प्युटर खोलेर यस उत्पादनको जानकारी खोज्न थालें। मैले फेला पारे कि यो यस वेबसाइटबाट अर्डर गर्न सकिन्छ ...
लामो-प्रतीक्षित डेलिभरी धेरै दिनमा आइपुग्यो। मैले प्रयोग अनुहारको अनुपालनमा मेरो अनुहारमा सीरम राख्न शुरू गरें। मैले भोलिपल्ट परिवर्तन देखेको थिएँ! काँको खुट्टा देख्न सजिलो थियो। मेरो निधारमा नासोलाबियल फोल्ड र झुर्राहरू महत्वपूर्ण रूपमा कम भयो। मेरो छाला सेतो भयो र मेरो अनुहारको रूप सुधारियो। परिणामले मलाई साँच्चिकै खुशी बनायो। मैले अक्षरशः मेरो अनुहारबाट 15 वर्षहरू मात्र एक महिनामा मेटायो।
त्यसो भए,3महिना बितिसक्यो जब मैले यो शानदार उपाय प्रयोग गर्न शुरू गरें। म एउटा कुराको बारेमा निश्चित छु - म आफैंलाई अझै बढी मन पराउँछु। मेरो श्रीमान् मेरो नतीजा पनि मन पराउनुहुन्छ। ऊ भन्छ, ऊ मलाई एक पटक फेरि माया गर्छ।
यो साँच्चै उत्कृष्ट छ कि यस्ता आविष्कारहरू सौन्दर्य उद्योगमा देखा पर्दछन्! मलाई लाग्छ मैले युवावस्थाको सर्वश्रेष्ठ अमृत भेट्टाएँ। तपाईलाई सबै सुन्दरता र स्वास्थ्यको कामना गर्नुहोस्!